တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး | အမျိုးသားလွှတ်တော်
ထိုင်း၊ မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူတို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံ သားများ သွားရောက်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲ မကြုံတွေ့ စေရန်၊ ထိုကဲ့သို့ ကူးလူးဆက်ဆံမှုများသော နိုင်ငံများတွင် နေထိုင် လုပ်ကိုင်စဉ်အတွင်း ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်နှင့် အကူအညီတောင်းခံနိုင်ရန် အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်ပါဝင်သော အသိပညာပေးရေး စာအုပ်ငယ်များ ရိုက်နှိပ်/ဖြန့်ချိပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
(၁၅) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၁၂.၁၂.၂၀၁၆)
၁၅ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ( ၁၂. ၁၂. ၂၀၁၆ )
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မင်းဘူး – စလင်း – တညောင် – ဆိပ်ဖြူ လမ်းပိုင်းရှိ မုန်းချောင်းတံတား (တံတားအမှတ် ၃၂/၂၅) နှင့် စလင်းချောင်း (နွယ်တမယ်)ဘေလီတံတား (တံတားအမှတ် ၄/၄၅)တို့ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နှစ်လမ်းသွား သံကူကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် ပြုပြင် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့ကို ဆက်သွယ် ထားသော မြိုင်-ဗဟင်း-ခင်အေးလမ်းအား ကျောက်ချောလမ်း သို့မဟုတ် ကတ္တရာလမ်း ခင်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ဝဲဒေါင့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးပင်စု ကျေးရွာနှင့် တောင်ငူမြို့နယ်၊ ကင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု ကင်းဆိပ်ကျေးရွာကို ဆက်သွယ်ထားသော နောင်ရိုး(ခပေါင်း) ချောင်းကူးသစ်သားတံတားအား သံကူကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ်သို့ အဆင့်တိုးမြှင့် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ ကျောက်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စက်နိုးကျေးရွာနှင့် နတ်တောင်ကျေးရွာကြားရှိ ချောင်းကူးတံတားကို သံကူကွန်ကရစ်တံတားအဖြစ် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(၁၄) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၉.၁၂.၂၀၁၆)
၁၄ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ( ၉. ၁၂. ၂၀၁၆ )